Ngaba Iinkundla ZaseBulgaria Ziza Kuyixhasa Inkululeko Yokunqula?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiBhulu IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLithuania IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiYoruba
AmaNgqina KaYehova ashumayela ngetroli eSofia, eBulgaria
FEBRUWARI 14, 2017
NgoJuni 4, 2016, uNikolai Stoyanov wayeshumayela ngetroli kwisitrato esiphithizelayo saseBurgas, enika abantu abadlulayo iincwadi zamaNgqina kaYehova simahla. Xa amapolisa afika kuye ngo-7:00 ebusuku, ambamba aza amtyhola ngokwaphula umthetho kamasipala ibe kwathiwa makahlawule i-350 yeerandi. Wayengomnye kumaNgqina amahlanu awayetyholwa nawahlawuliswa imali ngenyanga kaMeyi noJuni, ngenxa yokuba ayesenza umsebenzi wawo wokushumayela.
Iinkundla Zigwebe Ngelithi Amabhunga Edolophu Akawahloniphanga Amalungelo Okunqula Ngokukhulekileyo
UNikolai namanye amaNgqina amane abhenile kwizityholo zolwaphulo-mthetho ebebekwe zona nangokuhlawuliswa kwawo imali. Ngo-Oktobha nangoNovemba 2016, inkundla yeNgingqi yaseBurgas imfumanise engenatyala uNikolai namanye amaNgqina yaza yakurhoxisa ukuhlawula kwawo imali.
Okwangoku, amaNgqina KaYehova awuphikisile umthetho okumgaqo siseko eBurgas. Ngo-Oktobha 12, 2016, inkundla yaseBurgas ichaze ukuba lo mthetho uthintela amaNgqina kumsebenzi wawo uyakhabana nezinto ezikumgaqo siseko waseBulgaria ovumayo ukuhambisana neminye yehlabathi evumela abantu banqule ngokukhululekileyo.
IBhunga Ledolophu YaseBurgas belisazi ukuba lo mthetho uthintela amaNgqina ukuba ashumayele awuhambisani nokuhlonitshwa kwamalungelo abantu. Ngo-2013, umbutho wesizwe waphakamisa ukutshintshwa komthetho okumgaqo siseko, utyhola ngelithi abantu bayakhalaza ngenxa yomsebenzi wokushumayela owenziwa ngamaNgqina. Umlawuli wesithili waphinda wawuhlola lo mthetho waza wagqiba ngelithi ukutshintshwa kwawo kukuthatha icala ibe wakhupha umthetho wokuba awuhambisani nomgaqo siseko. Kodwa ke, umlawuli owalandelayo wawurhoxisa umthetho wokuba ukutshintsha kwawo akuhambisani nomgaqo siseko ibe ibhunga ledolophu lawutshintsha. Umlawuli ozimeleyo walilumkisa ibhunga ledolophu esithi ukutshintshwa komthetho okumgaqo siseko bekungafanelekanga, kodwa izinto ezitshintshiweyo kuwo bezisetyenziswa de Inkundla Yengingqi YaseBurgas yakurhoxisa ukutshintsha kwawo.
Kwenzeke into efanayo naseKyustendil, ibhunga ledolophu yakhona lagunyazisa ukuba utshintshwe umthetho ovumela ukuba abantu banqule ngokukhululekileyo laza lanyanzela amapolisa ukuba enze ezonto zitshintshiweyo. Inkundla yaseKyustendil yagweba amaNgqina amathandathu ngokwaphula umthetho yaza yathi mawahlawule iR5 683 isithi enza umsebenzi ongekho mthethweni, yabhala yathi: “Umntu owenza umsebenzi ongekho mthethweni umele aphenduliswe nokuba oko kulilungelo lakhe.” NgoJuni 24, 2016, kwale nkundla inye yafumana isicelo esenziwe ngamaNgqina yaza yathi, ukutshintshwa kwalo mthetho akuhambisani nomgaqo siseko. * Ibhunga ledolophu yaseKyustendil liye labhena kwesi sigqibo Kwinkundla Ephakamileyo.
Iimbono Ezahlukeneyo Ngelungelo Lokunqula Ngokukhululekileyo
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, bamalunga ne-44 oomasipala eBulgaria abatshintshe imithetho yabo ukuze bathintele ukwenziwa kwemisebenzi yonqulo yimibutho yonqulo ebhalisiweyo. Xa aba masipala benyanzelisa ukuthotyelwa kwale mithetho, amaNgqina afumana izilumkiso ezibhaliweyo, abizelwa ezinkundleni, ahlawuliswa imali ade aphathwa kakubi nasemzimbeni. Ngokomzekelo, ngoMatshi 26, 2016, uMarin Tsvetkov, igosa likamasipala eVratsa, lasongela amabhinqa amabini angamaNgqina lisithi liza kuwabizela oonqevu ukuze awabethe. Emva koko lathatha ezinye kwiincwadi zawo laza lazikrazula.
Sekunjalo, kwezinye iindawo, amagosa anembono entle neenkundla zaseBulgaria zalixhasa ilungelo lokunqula ngokukhululekileyo. NgoJuni 2, 2016, amagosa amathathu kwidolophu elikomkhulu eSofia aya kumaNgqina ayeshumayela ngetroli aza afuna ukubona isiqinisekiso sokuba ayinikiwe imvume yokwenza lo msebenzi. Emva kokuwuqwalasela lo mba, la magosa avuma ukuba umgaqo siseko waseBulgaria uyavuma ukuba kwenziwe umsebenzi wokushumayela. EPlovdiv, idolophu yesibini ngobukhulu kweli lizwe, ibhunga lale dolophu lawalela amaqela ezopolitiko awayezama ukutshintsha imithetho eyamkela amaNgqina njengonqulo.
Yintoni Eza Kwenzeka Kule Mithetho Iphikiswayo?
AmaNgqina KaYehova aseBulgaria athatha amanyathelo ukuze aphikise imithetho eyi-44 engawahloniphiyo amalungelo akumgaqo siseko avumela ukunqula ngokukhululekileyo. UKrassimir Velev, isithethi samaNgqina esikwiofisi yawo eseSofia, uthe: “AmaNgqina KaYehova anceda abantu basekuhlaleni ngokuthetha nabo ngezinto ezibakhathazayo aze aphendule imibuzo ngeBhayibhile. Abantu abaninzi bayasamkela isigidimi sethu, kodwa koomasipala ekukho imithetho engawuvumeliyo umsebenzi wethu wokushumayela, siyahlaselwa ngenxa nje yokuba sisasaza iincwadi okanye sithetha ngeenkolelo zethu. Xa kufanelekile ukwenza njalo, siyalikhusela ilungelo lethu lokunqula ngokukhululekileyo.”
AmaNgqina KaYehova ayavuya kuba amagosa amaninzi neenkundla zaseBulgaria ziyixhasa inkululeko yonqulo enceda abantu bonke. Akayazi ukuba enoba abasemagunyeni baza kuyiphelisa na imithetho engawuvumeliyo umsebenzi wokushumayela eBulgaria.
^ isiqe. 7 IBulgaria ibhalisile kwiEuropean Convention on Human Rights, evumela ukunqula, ukuthetha ngeenkolelo nokufundisa ngonqulo ngokukhululekileyo. INkundla YaseYurophu Elwela Amalungelo Abantu neEuropean Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), isoloko iwakhusela amaNgqina KaYehova xa enendibano okanye eshumayela kubamelwane.